Best Hair Care aromatherapy Rosemary Mkpa mmanụ ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | HaiRui
Iru eru na nsọpụrụ
Nkịtị Ọgwụ Bup ...
Nri nri eke kpakpando ani ...
Ezigbo mmanụ oregano dị ọcha
elu àgwà nnukwu Carvacrol ...
Natural pepemint wepụ ...
Hair Care Aromatherapy Rosemary Ezigbo Mmanụ
Onu ogugu di:
Pure Mkpa mmanụ
moisturizer, Whitening, na-edozi
100% Nkịtị dị ọcha
Hair Ude aromatherapy Rosemary Ezigbo Mmanụ
senti, ume ọhụrụ, ọgwụgwọ
Arịrịọ ndị ahịa
anyị nwere ike ime OEM / ngwaahia mbukota, ọkpọ bụ amba iko .such dị ka 10ml / 15ml / 20ml / 30ml / 50ml / 100ml / 500ml / 1000ml. anyị nwere ike ime onwe labeelu na ahaziri onyinye igbe. Anyị Nnukwu ngwugwu: 1 n'arọ Aluminom akpụkpọ anụ; 25kg kaadiboodu na plastic akpa na ya / 25kg / 50kg / 180kg Galvanized ígwè drum
Foto Ihe Nlereanya:
Ọnụ ọgụgụ (Kilogram) 1 - 50 51 - 200 201 - 1000 > 1000
Est. Oge (ụbọchị) 6 10 15 Ndi kpakorita
Mkpa mmanụ senti ngwa nri Rosemary 100% ọcha natueal esi ísì ụtọ mmanụ na Packaging Box
A na-amịpụta Rosemary mmanụ sitere na Rosmarinus officinalis (nke a makwaara dịka Rosmarinus coronarium) nke ezinụlọ Labiatae makwaara dị ka incensier.This crisp and ọcha na-esi isi mmanụ dị mkpa dị ukwuu maka na-akpali ụbụrụ, na-eme ka ncheta na nghọta doo anya, ma na-enyere ọtụtụ aka. nke congested akụkụ okuku ume na tract nsogbu, ikwesi olu ike, oyi yana boosting umeji na gall eriri afo. A na-ejikwa ya iji mee ka ahụike na ntutu dị mma.
Rosemary mmanụ bụ ihe magburu onwe ya maka ikpochapụ uche na ọgụgụ isi nke uche, yana imeziwanye ihe ncheta.Ọ na - enyere aka na isi ọwụwa, migraines, neuralgia, ike ọgwụgwụ nke uche na ike gwụrụ na ọrụ antiseptik nke mmanụ rosemary kachasị mma maka ọrịa nsị na afọ ọsịsa, na - ebelata colitis , dyspepsia, flatulence, ọrịa hepatic na jaundice ma na-ebelata ihe mgbu metụtara ọrịa rheumatism, ogbu na nkwonkwo, muscular mgbu na gout. Ọ na-enye aka maka arteriosclerosis, palpitations, adịghị mma mgbasa na varicose veins.
Njirimara diuretic nke mmanụ rosemary bara uru na mbenata njigide mmiri n'oge ịhụ nsọ, yana oke ibu na cellulite.
Ọ dị mma maka cosmtic na akpụkpọ na ntutu
25kg / 180kg / ịgbà
Ọrụ ngwugwu dị iche
1. 1-200ml / kalama
2. 1-50kg / gbọmgbọm rọba ma ọ bụ / karama aluminom
3. 180 ma ọ bụ 200kg / gbọmgbọm
4. Site na arịrịọ nke ndị ahịa
1. Sample iji: n'ime 24Hours afterpayment
2.under 1000kg: 7 ụbọchị ọrụ mgbe ịkwụ ụgwọ
3.1000-5000kg: 10-15 ụbọchị ọrụ mgbe ịkwụ ụgwọ.
Akwụkwọ & Ọrụ
1) Anyị nwere ike inye ndị na-eri ego na ọrụ nkwakọ ngwaahịa "otu nkwụsị", site na nyocha, mmepe, mmepụta, mbupụ na wdg
2) Ike R & D ike ka teknụzụ anyị na ọkwa ndu, ruo mgbe ebighi ebi, iji nye ndị ahịa ọrụ ka mma.
3) Anyị nwere akwụkwọ ISO & SGS nke na-eme ka ndị ahịa nwee afọ ojuju ma nwee obi ike.
4) Ihe karịrị afọ 19 nke mbupụ ahụmịhe, anyị nwere ike inye ndị ahịa ọrụ ọrụ ndị ọzọ.
5) Mix na iche iche ngwaahịa na ONE PCL, dịkwuo ọrụ arụmọrụ maka ndị ahịa.
6) Isi na Shanghai, Shanghai bu otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri kacha ukwuu n'ụwa, ọ dị mma maka ndị ọdịnala na-enye ọrụ ọrụ lọjistik.
7) Alibaba gold òtù na elu otuto.
Q1: Ndi mmanu a di nkpa bu ihe okike ma obu ihe omuma?
Azịza: Ọtụtụ n'ime ngwaahịa anyị na-amịpụtara site na osisi, enweghị ihe mgbaze na ihe ndị ọzọ. Ou nwere ike zụta ya n'enweghị nsogbu.
Q2: Ndi anyi nwere ike iji ya mee ihe ozugbo maka akpukpo aru?
Azịza: Obiọma plz mara na ngwaahịa anyị bụ mmanụ dị oke mkpa, ị kwesịrị iji mgbe oke na mmanụ isi
Q3: Gini bu ngwugwu nke ahia anyi?
A: Anyị nwere nchịkọta dị iche iche maka mmanụ na osisi wepụ osisi,
N'ozuzu, anyị na-eji 25kg Fiber Drums n'ime akpa plastik abụọ maka osisi siri ike wepụ, OD bụ Φ38 × 55cm nke ibu 3.0kg.
Maka mmanụ, anyị na-eji 50kg kpaliri Iron Drum nke 6.5kg net net, na ODΦ30 × 60cm,
na 180kg / 200kg. na ODΦ57 × 90cm nke ibu 21kg.
Q4: Kedu ka esi amata ọkwa nke mmanụ dị mkpa dị iche iche?
A: Enwerekarị akara 3 nke mmanụ dị mkpa,
Ọkwa A bụ ọkwa Pharma, anyị nwere ike iji ya na ụlọ ọrụ ọgwụ na n'ezie na ụlọ ọrụ ọ bụla ọzọ.
ỌkwaB bụ Nri Nri, anyị nwere ike iji ha na nri nri, ụtọ ụbọchị wdg.
ỌkwaC bu ihe uda okpukpo, anyi nwere ike iji ya maka ekpomeekpo & isi, mma na nlekọta akpukpo aru.
Nke gara aga: Healing Solutions HDPE Bottle mbukota nke chlorophyll ntụ ntụ mmanụ
Osote: Nnukwu Ọnụahịa Nri Nri Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu
1.Are ndị a dị mkpa Mmanụ ma ọ bụ ihe arụ?
Anyị bụ ndị nrụpụta na ọtụtụ ngwaahịa anyị na-amịpụtara site na osisi, enweghị ihe mgbaze na ihe ndị ọzọ.
Nwere ike ịzụta ya n'enweghị nsogbu.
2.Are ngwaahịa anyị nwere ike iji ozugbo maka anụ ahụ?
Obi oma kwuru na anyị na-dị ọcha mkpa mmanụ, ị kwesịrị ị na-eji mgbe oke na isi mmanụ
3. Kedu ngwugwu nke ngwaahịa anyị?
Anyị nwere nchịkọta dị iche iche maka mpụta mmanụ na ihe ọkụkụ siri ike.
4. Kedu ka esi amata ọkwa nke mmanụ dị iche iche dị mkpa?
Enwerekarị akara 3 nke mmanụ dị mkpa
A bụ Pharma ọkwa, anyị nwere ike iji ya na ụlọ ọrụ ọgwụ na n'ezie dị na ụlọ ọrụ ọ bụla ọzọ.
B bụ Nri Nri, anyị nwere ike iji ha na nri nri, ụtọ ụbọchị wdg.
C bu ihe uda isi, anyị nwere ike iji ya maka ekpomeekpo & isi, mma na nlekọta anụ ahụ.
5.Kedụ ka anyị ga-esi mara njirimara gị?
Ngwaahịa anyị kwadoro ule ọkachamara ọkachamara ma nweta asambodo ndị ikwu, Ọzọkwa, tupu ị nye iwu, anyị nwere ike ịnye gị ngwaahịa ngwaahịa ahụ n'efu, mgbe ị gachara, ị ga-enweta nghọta ka mma maka ngwaahịa anyị.
6.Gịnị bụ nnyefe anyị?
Ngwaahịa dị njikere, Oge obula. Enweghị MOQ,
7. kedu usoro ịkwụ ụgwọ?
T / T, Paypal, Western n'otu, Alibaba ịkwụ ụgwọ
Rosemary Ezigbo Mmanụ
Chinese soplaya nlekọta anụ borage mkpụrụ essentia ...
belata onodu Natural Karọt mkpụrụ Mkpa Mmanụ
Hot n'ire ngwaahịa nke mkpa mmanụ na natura ...
ntutu ọgwụgwọ mmanụ wheat germ oi
Macadamia mmanụ zuru oke maka ịhịa aka n'ahụ, ọ dị mma sk ...
pọmigranet mkpụrụ mkpa mmanụ were na diffuser ...